တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေသော ဆင်အုပ်စု အနောက်တောင်ပိုင်းသို့ ဦးတည်နေ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ယူရှီးမြို့ Eshan ကောင်တီတွင် အာရှတောဆင်ရိုင်းများအား ဒရုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကူမင်း၊ ဇွန် ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ အာရှတောဆင်ရိုင်း ၁၄ ကောင်အုပ်စုသည် အရှေ့တောင်ဘက်သို့ နောက်ထပ် ၆.၃ ကီလိုမီတာ ဆက်လက်ဦးတည်သွားလာလျက်ရှိကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ယူရှီးမြို့ Tadian မြို့နယ်ရှိ သစ်တောဧရိယာအတွင်း ဆက်လက်ရှိနေသော အဆိုပါ ဆင်အုပ်စုသည် ဇွန် ၂၈ ရက် ညနေ ၅ နာရီမှ ဇွန် ၂၉ ရက် အလားတူအချိန်အထိ လှုပ်ရှားသွားလာခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်ကတည်းက ယင်းနေရာ၌ ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆင်များ၏ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု စောင့်ကြည့်ရေးဌာနချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ ရက်က အုပ်စုကွဲနေခဲ့သော ဆင်အထီးတစ်ကောင်မှာ ယခုအခါ ယူရှီးမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် ၅၃.၂ ကီလိုမီတာတွင် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ဆင်အုပ်စုသည် ဇွန် ၂၇ ရက်က အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း မသွားရောက်မီ ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က ငါးရက်ဆက်တိုက် တောင်ဘက်ယွန်းယွန်းသို့ ခရီးနှင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် ဇွန် ၂၈ ရက် ညနေ ၅ နာရီမှ ဇွန် ၂၉ ရက် အလားတူအချိန်အထိ ၄.၆ ကီလိုမီတာခန့် ဦးတည်သွားလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆင်အုပ်စုသည် ဇွန် ၂ ရက်နှောင်းပိုင်းက ယူနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကူမင်းမြို့သို့ ရောက်မီ Xishuangbanna Dai ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာသစ်တောမှ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်များက တစ်လခန့်အတွင်း ဆင်အုပ်စုကို လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့အား စေလွှတ်ထားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ဖြတ်သန်းသွားလာရ အဆင်ပြေနိုင်စေရန် လမ်းလွှဲ ပေးခြင်းနှင့် လူနေထူထပ်သောဧရိယာများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် အစားအစာများ အသုံးပြု၍ မျှားခြင်းများလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခြင်းနှင့် မြူထူထပ်သည့် ရာသီဥတုကြောင့် ဒရုန်းများဖြင့် ခြေရာခံသည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှာ ခက်ခဲခဲ့ရကြောင်း၊ မြေပြင်ခြေရာခံအုပ်စု ၁၂ စုသည် ဆင်များ၏ ရွေ့လျားသွားလာမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။အာရှဆင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံအဆင့်-အေ (A-level) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် ထားရှိပြီး ၎င်းဆင်များကို ယူနန်ပြည်နယ်၌ အများအားဖြင့် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ထားခြင်းကြောင့် ယင်းပြည်နယ်ရှိ တောရိုင်းဆင်အရေအတွက်မှာ ၃၀၀ ခန့် တိုးလာခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက ၁၉၃ ကောင်ရှိရာမှ မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
China’s migrating elephant herd keeps heading southeast
KUNMING, June 29 (Xinhua) — The herd of 14 wandering wild Asian elephants in southwest China’s Yunnan Province has continued to head southeast, advancing 6.3 km, authorities said Tuesday.
The movement took place from5p.m. Monday to the same time on Tuesday, with the herd remaining within the forest area of Tadian Township under the city of Yuxi. They had been here for the previous two days, the headquarters in charge of monitoring the elephants’ migration said.
A male elephant, which strayed 24 days ago, is now 53.2 km to the northeast of the herd in the Hongta District in Yuxi.
The herd had traveled southward for five consecutive days last week before moving slightly to the northeast on Sunday. From5p.m. Sunday to the same time on Monday, they headed about 4.6 km southeast.
The animals traveled about 500 km north from their forest home in southern Yunnan’s Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, reaching the provincial capital Kunming on June 2.
Continuous rains and foggy weather have complicated the tracking efforts of drones. Twelve ground tracking groups monitor the elephants’ movement and warn residents nearby to evacuate, the headquarters said.
On Tuesday, 327 people were mobilized, 1,428 residents evacuated, and 1.1 tonnes of food was provided to the elephants.
Photo : Screen grab from drone video shows the Asian elephants in Eshan County of Yuxi, southwest China’s Yunnan Province on June 20, 2021. (Xinhua)
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါကြောင့် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်အထိ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပျံသန်းမှုများ ရပ်နားထားဆဲ
လာအိုနိုင်ငံ၌ COVID-19 ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ် Delta ကို လူ ၃ ဦးထံတွင် ပထမဆုံးစစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း အတည်ပြု